China SAUVANA andlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Foton
Hapụ ihe mgbochi n’ájá
Typedị ahụ 4 × 2/4 × 4
Ntọala ụkwụ ụkwụ 2790mm
Nhazi Ọkọlọtọ / Okomoko
Nkeji nwechapụ 220
Mgbapụ 5MT / 6AT
.Dị F2.8 / G01
Externalwa dị na mpụga jupụtara na agụụ na ihe ịma aka. Kedu otu ụwa nke na-agwa onwe ya ga-esi jiri mmetụta uche bara ụba na ọnọdụ ahụ gaa na-enweghị Foton SAUVANA. Site na ịdị mma dị elu na arụmọrụ kacha mma nke Foton SAUVANA, ị nwere ike igosi onwe gị, jikọta ụwa ma nwee ọ travelụ njem njem gị n'ụzọ zuru oke.
Anya nlele anya
Cummins ISF2.8 ukwuu ịrụ ọrụ dizel engine
Usoro oriri na-eri nri
BOSCH na-ejikwa eletrik na-achịkwa usoro ntinye mmanụ ụgbọ okporo ígwè
EGR (Iyuzucha Gas Recirculation) sistemụ gbakwunyere teknụzụ DOC (Diesel Oxidation Catalyst)
Itinye aka na okike na ọmarịcha ọnọdụ achọghị mkpa nke nchekwa.
PRETENSIONER oche eriri
A na-eme ka eriri oche ahụ nwee nsogbu na mkpọchi ka ọ wee belata mmetụta nke igbe nke ndị njem
Iji gbochie taya ihu na azụ mkpọchi,
2H Ọnọdụ ụgbọala abụọ, ọnọdụ a dabara adaba maka ụzọ awara awara
UTgbọala anọ-wheel mode, ọ dịghị kpochidoro center esi, a mode adabara ọzọ mgbagwoju ụzọ usoro gburugburu aro torque dị ka ụzọ ọnọdụ na-akpaghị aka kenyere, n'ihu axle torque nke 0-50% nwere ike ekenyela.
4L Ugbo ala agba agba anọ, agba mkpọchi etiti, ọnọdụ a dabara adaba maka ọnọdụ ụzọ adịghị mma, ihu na azụ azụ axle 50: 50